Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Oo Furay Maalmaha Talaalka Hooyada Iyo Caruurta (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Oo Furay Maalmaha Talaalka Hooyada Iyo Caruurta (Sawiro)
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Oo Furay Maalmaha Talaalka Hooyada Iyo Caruurta (Sawiro)
June 5, 2010 - By: Abdirahman. A
Munaasabad balaaran oo lagu furaayay maalmaha talaalka Hooyada iyo Carrurta ayaa maanta lagu qabtay Xarunta Wasaarada Caafimaadka ee Puntland taas oo ay kasoo qaybgaleen Madaxweyne Kuxigenka Puntland Gen.C/samad Cali Shire,Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr.Cali Cabdulaahi Warsame iyo Madax ka socota Hay’adda UNICEF iyo WHO.
Munaasabadaan ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horaysay Wasiirka Caafimaadka Puntland D.r Cali C/laahi Warsame oo sheegay in maanta si siman uu uga bilaabmay talaalka degaanada Puntland una soconaayo mudo 5 cisho ah.
Maqal Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo furaaya maalmaha talaalka dhalaanka iyo hooyada [powerpress]
Sidoo kale wuxuu sheegay in talaalkan uu yahay mid tayaysan oo ah talaalka dunida laga isticmaalo mid lamida ah.
Sarkaal Ka socday Hayâ€™adda UNICEF ayaa isna ka hadlay goobtaa,waxaana uu sheegay in talaalkan looga dan leeyahay sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka Hooyada iyo dhalaanka taasoo la keenay talaalka tayaysan oo laga talaalayo cudurada halista ah.
Waxaa kale goobta Ka hadlay Hayâ€™adda WHO sarkaal ka socday oo lagu magacaabo Dr Shiikh Cali oo isna ka hadlay faa’idooyinka talaalka uu u leeyahay Hooyada iyo dhalaanka.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ahna sii hayaha xilka Madaxweynaha Puntland Gen.Cabdi Samad Cali Shire ayaa si rasmi ah u furay isagoo cunugii ugu horayayna goobtaa ku siiyay talaalka.
Wuxuu goobtaa ka sheegay in talaalkan uu yahay mid lasoo hubiyay loona baahan yahay in Hooyo kasta ay caruurteeda talaasho si ay uga hortagaan cudurada halista ah oo ku dhici kara hadaan caruurta la talaalin.
Maanta ayaa dhamaan waxaa ka bilaabmay degaanada Puntland talaalka Hooyada iyo caruurta kaas oo soconaaya mudo shan maalmood.